Cunsuriyada ka dhanka ah Muslimiinta iyo Yuhuuda oo siyaaday | Somaliska
Dambiyada naceybka ku saleysan ee looga soo horjeedo dadka Muslimiinta iyo Yuhuuda ah ayaa siyaaday sida lagu soo bandhigay cilmi baaris ay sameysay hay’ada dowliga ah ee (Forum för levande historia). Warbixinta ayaa lagu soo bandhigay in tirada websiteyada ku saleysan cunsuriyada ay labo jibaarmeen ilaa sanadkii 2007 iyadoo tiradaas hada ay gaarayso 15,000.
“Sweden waa wadan soo dhaweyn fiican balse warbixintaan waxay muujineysaa in cunsuriyada ay sii siyaadayso oo la casriyeynayo. Waxaa jira tiro yar oo daris u ah naceybka ka dhanka ah Muslimiinta iyo Yuhuuda” ayuu yiri wasiirka isdhexgalka Erik Ullenhag.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in cunsuriyiintu ay Muslimiinta ku sifeeyaan dad soo duulay oo doonaya in ay wadanka la wareegaan, halka Yuhuuda lagu sifeeyo dad madaxa ka haysta dadka kale. Sweden ayaa waxaa ku nool Muslimiin lagu qiyaaso 300,000 iyo Yuhuud gaaraysa 20,000.
Wasiirka isdhexgalka ayaa sheegay in loo baahanyahay in la ogaato sababta ka dambeysa neceybka siyaadayo oo si firfircoon loola dagaalamo cida hurineysa cunsuriyada.
Qidmada laga bixiyo tv-ga iyo raadiyaha oo laga yaabo in la joojiyo ama la dhimo
Walaac laga qabo falalka ammaan xummo ee xaafadaha qaar ee Göteborg ka taagan
alaah musliimiinta kor haka dhigo mar walbo aduun iyo aqiraba